Muxuu yahay inverter hadda wax ka badala maxaase loogu talagalay | Cusbooneysiinta Cagaaran
Haddii aad rakibayso qalabkaaga qoraxda ku shaqeeya waxaad ogaan doontaa inaad u baahan tahay aalado dhowr ah si ay wax walba si habboon ugu shaqeeyaan. Kaliya kuma xirna rakibidda qalabka korontada ku shaqeeya ee qorraxda iyo sugidda qorraxdu si ay shaqada inteeda kale kuu qabato Si korontadu si fiican ugu shaqeyso, waxaad u baahan doontaa qalabka wax badala, iyo waxyaabo kale.
Ma rabtaa inaad ogaato waxa inverter hadda jira uu yahay, sida loo rakibo iyo waxa loogu talagalay?
1 Awood beddelka nidaamka tamarta qorraxda
2 Waa maxay qalabka wax soo beddela ee la isticmaali karaa?
3 Mawjad la beddelay iyo inverter mowjadda sine
4 Immisa maal-galiye ayaan ku baahanahay gurigeyga?
5 Xuduudaha aasaasiga ah
Awood beddelka nidaamka tamarta qorraxda
A inverter awood ayaa loo isticmaalaa in lagu beddelo 12 ama 24 danab danab oo baytariyada ah (toos ah hadda) si loogu isticmaalo danab guriga oo ah 230 volts (alternating current). Marka korontada ku shaqeysa soolarku ay dhaliso koronto, waxay ku sameysaa koronto toos ah. Xilligan hadda la joogo naguma adeegayso inaan ku isticmaalno qalabka korontada ee guriga sida telefishanka, makiinadaha dharka lagu maydho, foornada IWM. Beddelaad hadda leh danab dhan 230 volts ayaa loo baahan yahay.
Intaa waxaa dheer, dhammaan nidaamka nalalka guriga wuxuu u baahan yahay beddelaad hadda. Inverter-ka ayaa daryeelaya waxaas oo dhan mar haddii qoraxda qorraxda ay tamar ka hesho qorraxda oo ay ku keydiso batterigeeda. Wareegtada hadda socota waa mid ka mid ah canaasiirta ka kooban qalabka qorraxda Taas oo aan ku heli karno tamar dib-u-cusboonaysiin ah oo gurigeenna ah isla markaana aan ku yareyno cunidda tamarta foosha.
Waa inaan xusuusnaano in isticmaalka tamarta la cusboonaysiin karo ay gacan ka geysaneyso yareynta gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ee hawada ku jira waxayna noo oggolaaneysaa inaan ku sii horumarinno kala-guurka tamarta ee ku saleysan goynta deymaha sanadka 2050
Haddii nalalka aan u baahannahay uu aad u hooseeyo oo uu leeyahay fiilooyin yar, rakibaadda waxaa lagu sameyn karaa iyada oo aan la isticmaalin qalabka wax lagu beddelo. Waxay si toos ah ugu xidhi lahayd batteriga. Sidan oo kale, wareegga korantada oo dhan wuxuu la shaqeyn doonaa 12 volt, halka kaliya 12 V nal iyo aalado la isticmaali karo.
Waa maxay qalabka wax soo beddela ee la isticmaali karaa?
Markaan dooneyno inaan ku dhejino tamarta qoraxda guriga, waa inaan ogaano dhamaan walxaha ay rakibaadu ugu baahan tahay hawlgalkeeda saxda ah. Waxaa jira dhowr nooc oo qalabka wax soo beddela. Si aad u doorato qalabka wax soo beddela ee hadda ku habboon xaaladdeenna, waa inaad tixgelisaa awoodda la qiimeeyay iyo awoodda ugu sarreysa ee qalabka wax lagu beddelo.
Awoodda magacaaban waa tan uu rogaha awood u leeyahay inuu bixiyo inta lagu jiro isticmaalka caadiga ah. Taasi waa, inverter shaqeynaya waqti dheer iyo waxqabadka caadiga ah. Dhinaca kale, awoodda ugu sarreysa waa tan uu inverter-ka hadda socda kuu soo bandhigi karo muddo gaaban. Awooddan ugu sarreysa ayaa loo baahan yahay marka aan adeegsanno xoogag koronto xoog leh si aan u bilowno ama aan u helno dhowr aaladood oo xoog leh isla mar ahaantaana ay ku xirmaan.
Sida iska cad, haddii aan waqti badan ku qaadanno sida tamarta sare leh ee loo baahan yahay, qalabka wax soo beddelayaa hadda ma awoodi doono inuu na siiyo tamarta aan u baahanahay, oo si otomaatig ah ayuu shaqada u joojinayaa (si la mid ah goorta "hoggaamiyeyaashu ay boodaan"). Awooddan ugu sarreysa ayaa lagama maarmaan u ah in si fiican loo ogaado goorta aan isticmaaleyno qalabka korontada sida qaboojiyaha, qaboojiyaha, qas, mashiinnada dharka lagu dhaqo, bambooyin biyo, iwm. Iyo dhowr ka mid ah isla waqtigaas. Maadaama qalabkani u baahan yahay ilaa saddex jeer awoodda caadiga ah ee qalabka korantada, qalabka wax lagu beddelo ayaa loo baahan doonaa si uu noo siiyo awood sare.
Mawjad la beddelay iyo inverter mowjadda sine
Rootiyaashaan hada waxaa loo isticmaalaa oo kaliya qalabka korontada ee aan laheyn mootada oo aad u fudud. Tusaale ahaan, nalal, TV, muusig, iwm. Tamarta noocan ah waxaa loo adeegsadaa inverter wax beddela mawjadda hadda la beddelo, maadaama ay elektiroonig ahaan u soo saaraan hadda.
Waxaa sidoo kale jira rogaal celiyayaal mowjad sine ah. Kuwani waxay soo saaraan isla mowjadda laga helo guriga. Badanaa way ka qaalisan yihiin rogayaasha rogayaasha wax laga beddelay laakiin waxay na siiyaan adeegsi dheeri ah. Sidoo kale waa loo isticmaali karaa qalabka leh mishiinno fudud oo adag, qalabka elektarooniga ah iyo kuwa kale, oo bixiya hawlgal sax ah iyo waxqabad aad u fiican.
Xaqiiqda muhiimka ah ee lagu xisaabtamayo rogayaasha hadda jira waa inaad had iyo jeer ixtiraamto awoodda moodelkan aan soo iibsannay uu awood u leeyahay inuu keeno. Haddii kale qalabka wax kala beddelayaa wuu buux dhaafi doonaa ama uma shaqeyn doono sidii la rabay.
Immisa maal-galiye ayaan ku baahanahay gurigeyga?
Si loo ogaado tirada rogayaasha hadda aad u baahan tahay, waa muhiim in la ogaado Awoodda ku jirta watts ee ay tahay in qalabkaaga qoraxda ay u beddelaan si ay u daboolaan baahida korantada Markii aan tan xisaabinay, tirada watts waxaa loo qaybiyaa awoodda ugu badan ee inverter kasta uu taageero, iyadoo kuxiran nooca.
Tusaale ahaan, haddii rakibaaddayada korontadu ay leedahay wadar dhan 950 watt, oo aan soo iibsannay rogaal-celiyayaal hadda jira oo gaaraya 250 watt, waxaan u baahan doonnaa 4 rogaal-celiyayaal si ay u daboosho baahidaas tamarta iyo inay awood u yeelato inay beddesho dhammaan dariiqa tooska ah lagu soo saaray baalayaasha cadceedda oo loo beddelay tamar beddel u ah isticmaalka guriga.
Xuduudaha aasaasiga ah
Qalabka wax beddelayaa wuxuu leeyahay dhowr xaddidood oo aasaasi ah oo hawlgal ah. Waxay kala yihiin sidan soo socota:
Danab magaceed. Kani waa danab ay tahay in lagu dabbaqo kumbuyuutarrada soo galaya qalabka wax lagu beddelayo si aan culeys badan loo saarin.
Awood la qiimeeyay. Waxaa kor ku xusan. Waa awoodda uu inverterku awood u leeyahay inuu si isdaba joog ah u keeno (waa inaannaan ku qasin awoodda ugu sarreysa).
Awood xad dhaaf ah. Kani waa awooda rogaalka si uu u keeno awood ka sarreysa sidii caadiga ahayd ee uu sameyn jiray kahor rarka badan. Tani waxay la xiriirtaa awoodda ugu sarreysa. Taasi waa, waa awoodda inverter-ka uu u adkeysan karo awood ka sareysa tan caadiga ah isaga oo aan culeys badan saarin iyo muddo gaaban.
Hirarka Mawjadaha. Calaamadda ka soo baxda korantada qalabka wax lagu beddelo ayaa ah waxa lagu garto qaab-dhismeedkeeda iyo qiimaha ugu waxtarka badan ee korantada iyo soo noqnoqoshada.
Karti. Waxay u dhigantaa in loogu yeedho waxqabadkaaga. Tan waxaa lagu cabiraa boqolley ahaan awoodda wax soosaarka iyo soo-geliyaha. Waxtarnimadani waxay si toos ah ugu xidhan tahay xaaladaha xamuulka ee qalabka wax soo roga. Taasi waa in la yiraahdo, wadarta awoodda dhammaan aaladaha ku xiran iyo kuwa tamarta cunaya, waxaa quudinaya qalabka wax soo beddela ee la xiriira awooddooda magac ahaan. Inta qalab ee badan laga quudinayo qalabka wax roga, ayaa waxtarkeedu sii weynaanayaa.
Macluumaadkan waxaad awoodi doontaa inaad ku ogaato nooca qalabka wax lagu beddelo ee aad u baahan tahay inaad ku dhammaystirto qalabkaaga qorraxda. Ku soo dhowow adduunka tamarta dib loo cusboonaysiin karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta Qoraxda Photovoltaic » Waa maxay inverter hadda jira maxaase loogu talagalay
Sharaxaad aasaasi ah oo la fahmi karo oo aan u lahayn khubaro aniga oo kale ah, ... aad baad u mahadsan tahay
Ku jawaab gong
Mashiinka dharka lagu dhaqo iyo talooyinka lagu ixtiraamo deegaanka